Ecommerce Atụmatụ Ndepụta: Ultimate Must-Haves for Your Online Store | Martech Zone
Otu n’ime akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu anyị kesara n’afọ a abụwo nke anyị zuru ezu websaịtị atụmatụ nyocha. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe di egwu nke ndi ozo n’enyeputa ihe omuma di iche iche, Mgbasa Ozi MDG.
Kedu ihe e-commerce na ebe nrụọrụ weebụ dị ezigbo mkpa nye ndị ahịa? Kedu ihe ndị ahịa kwesịrị ilekwasị anya oge, ike, na mmefu ego iji meziwanye? Iji chọpụta, anyị lere anya n'ọtụtụ nyocha, akụkọ nyocha, na akwụkwọ agụmakwụkwọ. Site na nyocha ahụ, anyị chọpụtara na ndị mmadụ gafee mpaghara niile na vetikal na-ejikwa otu atụmatụ weebụsaịtị ole na ole akpọrọ ihe mgbe ị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Kedu ndị ahịa chọrọ na weebụsaịtị E-Commerce
Nsonaazụ nke nyocha ha na nyocha nke ndị ọkachamara butere isi edemede 5 na-aga ije ihe kachasị mkpa ụlọ ọrụ ecommerce maka ịkwọ ụgbọ ala, ikike, na ntụgharị. Agbakwunyere m ọkacha mmasị nke aka m nke nsonaazụ nyocha ahụ tụfuru.
47% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na iji ọrụ na ịzaghachi bụ ihe kachasị mkpa nke weebụsaịtị webụsaịtị e-commerce
Speed - saịtị ecommerce ga-adị ngwa ngwa. 3 n’ime ndị ahịa 4 na-ekwu na ha ga-ahapụ ebe nrụọrụ weebụ e-commerce ma ọ bụrụ na ọ dị nwayọọ ibu
kensinammuo - igodo, ihe nkwuputa ụgbọ ala nkịtị, na njirimara saịtị ga-adị mfe ịchọta ma jiri.
anabata - 51% nke ndị America niile na-azụ ihe n'ịntanetị site na mkpanaka, yabụ ụlọ ahịa ahụ ga-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu gafee ngwaọrụ niile.
Mbupu - ụgwọ mbufe dị oke ọnụ na oge nnyefe ogologo ga-emetụta ahịa.
Security - Gbaa mbọ hụ na ị ga-apụ na akwụkwọ SSL SSL ma bipụta asambodo nyocha ndị ọzọ.
laghachi iwu - mee ka ndị ọbịa mara amụma nloghachi gị tupu ịzụta.
Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa - nye nkata ma ọ bụ akara ekwentị iji zaghachi ahịa ma ọ bụ arịrịọ ọrụ.
Comprehensive Product Ozi
Ndị ọbịa anaghị adị njikere ịzụta, ha nọ ya nyocha. Mgbe ị nyere ozi niile ha chọrọ, ha ga - enwe ike ịzụta ihe mgbe ọ zuru oke.
Product Details - 77% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ọdịnaya na-emetụta mkpebi ịzụta ha
Ajuju na Azịza - Ọ bụrụ na ozi ahụ adịghị ebe ahụ, 40% nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị na-achọ ụzọ isi jụọ ajụjụ ma nweta azịza tupu ịzụrụ
nke ziri ezi na - 42% nke ndị na-azụ ahịa alọghachila ịzụta n'ịntanetị n'ihi ozi ezighi ezi na 86% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ha agaghị azụ ahịa site na saịtị ebe ha zụtara ya.
Dị na ngwaahịa - Onweghị ihe na-ewute gị karịa ị nweta ụzọ ndenye ọpụpụ tupu ịchọpụta ngwaahịa anaghị adị. Debe saịtị gị na nsonaazụ ọchụchọ gị site na iji snippets bara ụba.
Ihe oyiyi, Ihe oyiyi, Ihe oyiyi
Ndị ọbịa na-achọkarị nkọwapụta anya na ngwaahịa ebe ha na-anọghị ebe ahụ iji nyochaa ha n'onwe ha. Inwe oke nhọrọ nke onyonyo mkpebi dị elu ga-eme ka ịzụrụ ihe ọzọ.
Otutu Foto - 26% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha ahapụla ịzụ ahịa n'ịntanetị n'ihi onyonyo adịghị mma ma ọ bụ onyogho pere mpe.
Mkpebi dị elu - Inye ikike iji hụ njedebe nkọwa na ihe nke foto dị oke mkpa nye ọtụtụ ndị na-azụ ahịa ịntanetị.
Mbugharị - 71% nke ndị na-azụ ahịa na-eji atụmatụ mbugharị na njirimara foto
Speed - Gbalịsie ike na apịachiri ihe oyiyi gị ma bulie ya na netwọkụ nnyefe ọdịnaya iji hụ na ebufere ha ngwa ngwa. I nwedịrị ike ịchọrọ ịkwanye ihe oyiyi na-adịghị elekwasị anya (dị ka carousel).
Ogo na Nyocha
Mebata nyocha / elebara anya na saịtị gị ga-enye echiche dịgasị iche ma wulite ntụkwasị obi na ndị ọbịa. N'ezie, 73% nke ndị na-azụ ahịa chọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ na-azụ ihe nwere ikwu tupu ha emee mkpebi
Ebiputaghi ya - Ndị ahịa anaghị atụkwasị obi na ntụnye zuru oke, ha na-enyocha ntụle ndị na-adịghị mma iji hụ ma echiche ndị ọzọ banyere ngwaahịa ga-emetụta mkpebi ịzụta ha.
Onye nke atọ - 50% nke ndị na-azụ ahịa chọrọ ịhụ nyocha ngwaahịa nke atọ
iche iche - Ndị ahịa chọrọ inwe ahụ iru ala gbasara nzụta, chọrọ inwe ike ijide ụlọ ọrụ ajụjụ, ma chọọ ịhụ nyocha dị iche iche na-elekwasị anya na ogo na nchekwa nke ngwaahịa.
Mpekere - mụbaa arụmọrụ nke ogo na nyocha gị site na iji snippets bara ụba ka ha wee pụta na nsonaazụ ọchụchọ.
Nchọgharị Ngwaahịa Na saịtị
Nchọgharị saịtị dị oke mkpa na ahụmịhe azụmahịa ọ bụla. Maka ụfọdụ ndị na-azụ ahịa, 71% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha na-eji ọchụchọ ahụ oge niile, ọ na-abụkarịkwa ihe mbụ ha gara na saịtị.
Na Na Na Na Na - Mee na arụmọrụ zuru ezu nke zuru oke nke na-aza aha ngwaahịa, edemede, wdg.
Nchọgharị Semantic - Jiri nchọta mmụta asụsụ iji nyefee nsonaazụ kacha mma
nzacha - 70% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha bara nnukwu uru inwe ike ịza ngwaahịa site na nyocha saịtị
Nhọrọ - Ikike iji dozie nyocha, ahịa, na ịnye ọnụahịa niile na-enyere ndị ọrụ aka ịchọta ngwaahịa ha chọrọ.
Breadcrumbs - Gụnye ihe nchọgharị, dịka achịcha achịcha na ibe nsonaazụ
Nsonaazụ Zuru ezu - Ugbu a oyiyi na ratings n'ime search results
atụnyere - Nye ohere iji nyochaa atụmatụ ngwaahịa na ịnye ọnụahịa otu akụkụ.
Tags: akpaaka-zuru ezuikorindị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịae-azụmahịakpoecommerceecommerce bara ọgaranya snippetsọsọ ọsọ ecommercemcommercemdg mgbasa ozingwa ahiammegheatụnyere ngwaahịangwaahịa nzachaọchụchọ ngwaahịanhazi ngwaahịaajụjụ na azịzaNtụlelaghachi iwuNyochaatụmatụsecuritynyocha semanticmbupunyocha saịtịruombugharị